နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: ကျေးဇူးပါ မေမေ။ (25 Dec '08)
(ဒီပို့စ်တက်နေချိန်မှာ ကျွန်တော်ဟာ အင်တာနက်နဲ့ အလှမ်းကွာတဲ့ နေရာကို ရောက်ကောင်း ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့် မွေးနေ့မှာ အမှတ်တရ တစ်ခုခုတော့ ရေးထားခဲ့ချင်လို့ ကြိုပြီးတော့ ရေးထားခဲ့တယ်။ မွေးနေ့မှာ အော်တိုတက်နိုင်အောင် Schedule ရေးထားတဲ့ ပို့စ်ပါ။ တစ်ခြား အမှတ်တရ ရေးထားဖြစ်ပေမယ့် မတင်ဖြစ်လိုက်ဘူး။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:52 AM
ThuHninSee December 25, 2008 at 2:57 AM
Happy birthday ပါ ကိုယ်တော်။
Moe Cho Thinn December 25, 2008 at 3:14 AM
A Very Happy Birthday ပါ ဗျို့..
ကောင်းခြင်း မင်္ဂလာ ပြည့်စုံတဲ့ နေ့မှာ မွေးသူမို့ နေ့ရက်တိုင်းမှာ မင်္ဂလာတွေနဲ့သာ ပြီးပြည့်စုံပါစေလို့..
အသက်လဲ တနှစ်ကြီးပြီ လိမ်လိမ်မာမာလဲ နေအုံးပေါ့ :)
khin oo may December 25, 2008 at 3:51 AM
Nay Nay Naing December 25, 2008 at 5:06 AM
မီယာ December 25, 2008 at 6:06 AM
May Moe December 25, 2008 at 7:40 AM
. December 25, 2008 at 8:54 AM
Happy Birthday.. ကိုဘွိုင်းဇ်။
ရှေ့ဆက်ရမယ့် ခရီး..ပျော်စရာများနဲ့ ပြီးပြည့်ပါစေ..။ :D ။
RePublic December 25, 2008 at 9:07 AM
" HAPPY BIRTHDAY " TO BOYZ
Ko Boyz December 25, 2008 at 9:59 AM
ကော်မန့်ရော CBox ထဲမှာရော ၀င်ပြီးတော့ Wish လုပ်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အသက်လဲ တစ်နှစ် ထပ်ကြီးလာပြန်ပါပြီ။
လိမ်လိမ်မာမာ နေဖို့ကလဲ ကြိုးစားပါတယ်ဗျာ...။
ksanchaung December 25, 2008 at 12:43 PM
Happy Birthday ဆရာ Boyz!
လာမယ့်နှစ်မှာ ပုံးနက် Bonus တွေ ဆထက်တစ်ပိုးတိုးပြီး ပြန်ရပါစေ။ ကိုယ်ဘယ်တော့မှ မသုံးဖြစ်တဲ့ Function တွေ တစ်နင့်တစ်ပိုးပါတဲ့ Hand Phone ကြီးတွေ ဘယ်တစ်လုံး၊ ညာတစ်လုံး ကိုင်နိုင်ပါစေ။ သေနတ်ပြောင်းလို ကြောက်စရာ Lens ဘီလူးကြီးတွေပါပြီး တော်ရုံအိတ်နဲ့ ထည့်သယ်လို့မလွယ်တဲ့ Digital Camera အသစ်ကြီးတစ်လုံး ၀ယ်နိုင်ပါစေ။ သစ်ရွက်လှုပ်တာကအစ Blog Post ဖြစ်အောင်ပြောင်းနိုင်တဲ့ Power တွေကို ပိုင်ဆိုင်လာပြီးခြင်းသကာလ Online ပရိတ်သတ်အပေါင်းကိုလည်း အစဉ်အလာမပျက် ဆက်လက်ဖျော်ဖြေနိုင်ပါစေဗျား။
ksanchaung December 25, 2008 at 12:48 PM
အဲအဲ။ အရေးအကြီးဆုံးကို မေ့သွားလို့။ နှလုံးသားရေးရာကိစ္စတွေမှာလည်း ကိုယ့်ဆရာ ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ပါစေဗျား။
NangNyi December 25, 2008 at 1:14 PM
ံHappy birthday to u .. Happy birthday to u.. Happy Birthday Dear P-Boyz.. Happy birthday to u .. :D ..
ခင်မင်းဇော် December 25, 2008 at 7:23 PM
ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့တွေကို ချစ်ရသူနဲ့ ဖြတ်သန်းရသော နှစ်တွေသာ ပိုင်ဆိုင်ရပါစေသော်ဝ်....
TZA December 26, 2008 at 1:18 AM
အာ.. ကျော်ဖတ်လိုက်တာ ယေရှုကိုများ (အဲဒီတုန်းက) ဖြူစင်တယ်လို့ ရေးရသလားလို့ စဉ်းစားနေတာ။ လက်စသတ်တော့ ဘွိုက်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာကိုး၊ လာခြင်းကောင်းတဲ့ ဘွိုက်ဘွိုက်စိုင်းလှိုင် မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ (၂၆ရက် ရောက်မှ ကော်မန့်ရေးဖြစ်တယ်ကွာ)
khin oo may December 26, 2008 at 2:31 AM
ကျွန်တော်လည်း ဝင်ပြီး Wish လုပ်ပေးလိုက်မယ်။
ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါ ကိုဘွိုင်းz. :D
December 25, 2008 7:45 AM
December 25, 2008 9:03 AM
ဟက်ပီဘတ်ဒေး ဒီဇင်ဘာဘွန်းလေး ဘွိုင်းးးဇဇဇဇဇ
Post တင်ပေးတဲ့ အမ်းမားရော၊ Wish လုပ်ပေးတဲ့ သယ်ရင်းများကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အပြင် သွားပြီဗျို့...။
December 25, 2008 9:57 AM
မီးမီးလည်း ၀င်ဆုတောင်းပေးသွားတယ်နော် မမ ရေ.
မွေးနေ့ဆိုရင် ပျော်တတ်လို့ပါ။း)
December 25, 2008 10:15 AM
ဘာမှလဲ မကျွေးဘူး..အော်.. အပြင်သွားတယ်ဆိုတော့ မုန့်သွားဝယ်တာထင်ရဲ့။ မျှော်နေသည်..
December 25, 2008 11:05 AM
December 25, 2008 3:04 PM
happy birthday ဘွိုင်းထုံ
ယနေ့ မှ နှစ်ပေါင်များစွာတိုင် ထုံညီအမများအား ဆက်လက်နှောက်ယှက်နိုင်ပါစေ
တိုဘွိုင်းစ်.. ဟတ်စ်ပီးစ်ဘတ်စ်ဒေးစ်ပါ့စ်... ဆုစ်တောင်းစ်ပေးစ်တွားစ်ဒယ်... .. Merry Christmas
December 25, 2008 3:53 PM
"Birthday wish" ဆိုတာထက် "Blog" ကြော်ငြာလိုပဲနော်။
December 25, 2008 4:37 PM
အွန်.. မွေးနေ့က ဒီနေ့လား၊ ဘယ်နေ့လဲ။ ခရစ္စမတ်စ်နေ့ကြီးလား။ မိုက်တယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေကိုကြီးဘွိုင်းစ်။
့Haappy Birthday ဘွိုက်ဇ်ထုံ ထုံ...
:P December 26, 2008 at 8:58 AM
မမကေအိုအမ်မှာ တစ်ခါ၊ စီပုံးမှာ တစ်ခါ၊ ခု တစ်ခါ.....
Happy Birthday Ko Boyz !!!!
Ko Boyz December 26, 2008 at 11:21 AM
မွေးနေ့ဆုတောင်းများ အတွက် အားလုံးကို ဒီကနေ သိမ်းကျုံးပြီး ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
နောက်ကနေ အလုပ်ဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါကြီးက ဒရောသောပါး လိုက်နေလို့ ခဏချောင်းကြည့်ရင်းနဲ့ ကသောကမျော ကျေးဇူးတင်ရတာပါ။
Unknown December 26, 2008 at 1:25 PM
Happy belated Birthday!! နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ် :)
khin oo may December 25, 2009 at 12:01 AM
Ko Boyz October 16, 2011 at 9:01 PM
အန်တီက တစ်နှစ်ထဲမှာ နှစ်ခါ လာဆုတောင်းတယ်။ :P
khin oo may December 25, 2011 at 12:40 AM
အမြဲသတိတယရှိပါတယ။် HAPPY BIRTHDAY!.
Ko Boyz December 25, 2011 at 1:10 AM
ကျေးဇူး အန်တီ။ အန်တီ စာတော်တော်ကြေတာပဲ။ :)